Top Yoga vanotiza In Europe And Zvakaoma Kusvika Ikoko By Train | Save A Train
musha > Yoga mu Europe > Top Yoga vanotiza In Europe And Zvakaoma Kusvika Ikoko By Train
Kana uri kutarisa kuti atizire pamusoro jooga dzakachengeteka mu Europe nokuda yako inotevera zororo, uri mhanza. Vamwe yakanaka kwazvo nyika dzokuEurope zvizhinji kupa kana totaura weyoga uye kutandara. Kunyange zvazvo India anonzi kuti zvikuru jooga nzvimbo munyika, VokuEurope zvechokwadi kukwidzwa tsika uye vakagamuchira sechinhu dzavo. Hezvino zvimwe pamusoro weyoga dzakachengeteka mu Europe, uyewo nzira kwava ikoko nechitima:
Yoga vanotiza kuItaly
Runako, chinozorodza nzvimbo dzokuona vanogona zvirokwazvo vachikwidziridza yenyu jooga tsika - tisingatauri mhepo yakachena uye mushana. Kana zvauri kutsvaga, zvino Italy ndiyo nzvimbo. Vose Vakamupfekedza jooga shure nzvimbo kunonga kubva, tinoda avo vari Tuscany. Unogona kutora yevedza chitima tasva kuburikidza nharaunda uye kugumisa rwendo uri jooga dzokera shure muna Chianti. Uchawana mushana, waini uye achigara Rangarirai uye chipo - chii chingava nani?
Perugia kuna Castellina Chianti Zvitima
Yoga vanotiza muFrance
Nokuti avo wenyu anoda makomo, French Alps vari kuzova mukana haugoni kurasikirwa. Other pane dzose weyoga, mu French Alps, Yoga vanotiza zvaungaita Hiking, Yoga, chena mvura Rafting, uye kunyange paragliding. Annecy iguta zvikuru kushanya kuti chinangwa ichi, uye iwe unogona kusvika nayo nechitima kubva Paris. Zviri Zvechokwadi rainakidza wakanyatsokodzera vanhu vanosarudza kuva vanoshingaira mararamiro.
Paris kuna Annecy Zvitima
Geneva kuna Annecy Zvitima
Yoga vanotiza muUK
The UK ine zvakawanda yevedza, mukare nzvimbo shure kuna, kufanana Glastonbury, Devon, Kent, Scotland, uye nevamwe. zvisinei, tichiri vanosarudza London nokuti mweya wayo yakasiyana uye mhepo. Kana uri kutsvaka dzomumaguta weyoga dzokera shure ruzivo, ndokubva London ndicho chisarudzo chakanaka. Kuwanda zvokusarudza ndichanamatirisa musoro wako kuruka - pane chinhu ose weyoga kuravira. Unogona kusvika nyore guta nechitima neevakawanda maguta makuru mu Europe, zvokuti chimwe bhonasi.
Jerimani Zvinotora hwomuviri kwayo kukoshesa uye kazhinji anosanganisa munhu jooga tsika ine zvizere Spa ruzivo. Zviri yakanaka pazororo kana uchida recharge mabhatiri enyu uye vanotsika kure chipatapata mararamiro. Germany kunyange inopa akanyarara chose dzakachengeteka, aine zvizhinji mindfulness yokufungisisa tsika uye vamwe chikuru Spa kurapa. Kubvumira kunyarara uye runyararo rezvakasikwa unoshambidza kunetseka kure ndiyo yakanaka yokuwana yokutandara. Kana ichi unorira chinhu ungada, unogona bhuku chitima kuna Bavarian Alps.
Ositiriya anoda kwayo chando weyoga dzakachengeteka, izvo zvinoita munhu akakwana rwendo munguva iyi gore. Wadii kuona mwaka yose pakubwinya kwayo? Kunyange kana unovenga chando, zvauri akasungwa kunzwisisa sei jooga dzakachengeteka muAustria kuti yomufaro mukuru ine. Vanotora kutonhora mamiriro okunze uye kuzvitengesa kuva utano zvinokuridzira mashandiro, pakusanganisirawo zvitaera siyana yoga, hikes uye rugare hope kuti kunzwa uine zvirwere. Salzburg nderimwe remaguta yeAustria apo unogona kuwana izvi, uye iwe unogona kusvika nayo nechitima.
Prague kuna Salzburg Zvitima
Gadzirira kurota kwenyu jooga uchapukunyuka muna rimwe pamusoro dzakasiyana muEurope? Bhuku rako chitima matikiti nokuti mumwe pamusoro weyoga dzakachengeteka muEurope vokutanga kuti zvakanaka zveefa pazvigaro!
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei kadhi rine kubatana iyi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/yoga-retreats-europe-train/ - (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Kana uchida kuva nomutsa vanoshandisa dzenyu, unogona kuvatungamirira zvakananga kunyika yedu mapeji kutsvaka. In batanidzo ichi, muchawana yedu rinofarirwa kupfuura chitima pakutengeserana – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml uye iwe unogona kushandura / Ave kuti / haulla kana / kuti ru uye mumitauro yakawanda.
#chirangariro #peacefulness #relaxation #Yoga europetravel Train Travel